Wararka Maanta: Khamiis, Sept 20, 2012-Hoobiyeyaal dhimasho iyo dhaawac geystay oo xalay lagu garaacay degmooyinka ka tirsan Magaalada Muqdisho
Hoobiyeyaashan oo aan la garaanyn halka ay ka yimaadeen ayaa waxay ku dhaceen guryo ay daggan yihiin dad shacab ah iyo kaam ku yaalla degmada Boondhere, halkaasoo ui ka dhashay khasaare fara badan.
"Kaamka aan dagganahay oo ku yaalla Boondheere waxaa kusoo dhacay hoobiyeyaal waxaa ku dhintay laba qof oo midkood dhiig bax u dhintay, waxaana ku dhaawacmay 16-qof oo kale oo ay ku jiraan hooyo iyo saddex caruur ah oo ay dhashay," ayuu yiri goobjooge ku sugnaa kaamka ay ku dhaceen hoobiyeyaasha qaarkood.
Dhaawacyada ka dhashay duqeynta ayaa qaarkood isla xalay la gaarsiiyay isbitaallada Keysaney oo ku yaalla duleedka Bari ee Muqdisho iyo isbitaalka Madiina oo ku yaalla dhinaca Koonfureed ee caasimadda. Iyadoo hoobiyeyaal ku dhacay degmada Shibbis ay ku dhimatay haweeneyda uurka leh.
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegtay inay xalay lix mdafac ku weerareen madaxtooyada Soomaaliya, balse lama oga khasaaraha ay geysteen, iyadoo hoobiyeyaashii khasaaraha geystay ee ku dhacay degmooyinka Boondheere iyo Shibbis ay tiradoodu ahayd sideed hoobiye.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in madaafiicdu ay ka imaanaysay dhinaca Waqooyi ee Muqdisho halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, iyadoo sidoo kale uu iska-horimaad kooban ku dhexmaray xaafadda Carrafaat ee degmada Yaaqshiid ciidamada dowladda kuwa Midowga Afrika iyo kooxo hubeysan.
Lama oga in iskahorimaadkan iyo hoobiyeyaashu ay xiriir lahaayeen, balse arrimahan oo dhan ayaa waxay kusoo beegmayaa xilli uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya sheegay inay muhiimadda koowaad siinayaan sugidda ammaanka guud ee dalka.
Duqeymahan ayaa waxay argagax weyn geliyeen dadkii ku noolaa degmooyinka iyo kuwa ku dhow, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo duqeymo noocan oo kale ah ay ku dhacaan degmooyin Muqdisho saddexdii bilood ee ugu dambeeyay.